ကွန်ပျူတာ Software များ : Myanmar Mobile Software Developer
MMSD ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
Category: ကွန်ပျူတာ Software များ
ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) |
December 18, 2013 | 13 Replies
Zapya ဆိုတာဘာလဲဆိုပြောစရာမလိုလောက်တော့ဘူးနဲ့ တူတယ်။ အခု PC အတွက် Zapya ထွက်ရှိလာပါပြီ။IOS ရော Android ရော ချိတ်ပီး သီချင်းတွေ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ဖိုင်တွေ ရှယ်လို့ ရပါတယ်။စမ်းကြည့်တာတော့အိုကေတယ်။ သုံးပုံသုံးနည်းကတော့ ဆော့ဖ်ဝဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့hotspot ထောင်ပီးသားပဲ။Password ရော တစ်ခါတည်းခံပီးသား။လွယ်ပါတယ်။ရှယ်ရတာလည်း မြန်တယ်။ Laptop တွေနဲ့ တော့ အိုကေတယ်။desktop တော့ မစမ်းကြည့်ရသေးဘူး အသုံးလိုရင်တော့အောက်ကလိပ်စာမှာရယူလိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ။ တရုတ်စာတော့ဖတ်တတ်ဝူး။သွင်းနည်းကတော့ အပြာရောင် စာတန်းတာနှိပ်သွားလိုက်။ Download ======================= Dev-Host l Dropbox l Cloud Storage Credit To : အမျိုးကောင်းသား
Facebook Friend Request Accept!!!
Min Gyi Taw |
Post by Min Gyi Taw.
I Toool 2013 !
IOS သမားများ အတွက် I tool ကလည်း အသစ်တွေထွက်လာပါပြီ သိပြီးသားသူတွေလည်းရှိနေသလို မသိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်… ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့သူတွေ ဒေါင်းပါဗျာ…….. ဘာတွေကောင်းသလဲတော့ မပြောတော့ဘူးနော်….အားလုံးလည်းသုံးဖူးနေပြီးသားလို့ ထင်ပါတယ်… Download ( I Tool ! )
Mobogenie PC Suit 2.1.1 For Android
July 15, 2013 |4Replies
Moborobo တို့ Wonder Share တို့ထက်အရမ်းလန်းတဲ့ PC suit လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်ဗျာ … Mobogenie တဲ့ …APK သွင်းတာကတော့ Moborobo တို့နဲ့အတူတူပဲ ..တစ်ခုသာသွားတာက Googleplay က app တွေကို PC ကနေတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလို့ရတာပဲ … youtube လဲတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလို့ရပါ၏ အပိုတွေပြောမနေတော့ဘူး … ဆွဲသာဒေါင်းပြီးသုံးကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ တင်ထားဖူးတဲ့သူရှိရင်လဲ Credit ပေးပါတယ် … Thanks You So Much For Downloading !!! Download Here (Mediafire Link)
April 15, 2013 | 12 Replies
ကျွန်တော်လည်း စာမေးပွဲဖြေနေရတာနဲ့ MMSD မှာ ပို့စ်မတင်ရတာတောင် တော်တော်လေး ကြာသွားပါပြီ… ခု software က apk icon တွေကို PC ပေါ်မှာ ပေါ်စေဖို့အတွက်ပါ… PC မှာ install လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ….ကဲ လိုချင်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြပါဗျာ… Download Here rar password : saikhinetint@MMDT အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…. စိုင်းခိုင်တင့် ([email protected]) လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဝေဖန် အကြံပြုချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် မနက်ဖြန်တွေအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ…. *******(လင့်ကို drop box ကနေ update ပြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်)******
April 8, 2013 | 11 Replies
ကျွန်တော်လည်း စာမေးပွဲဖြေနေတာနဲ့ MMSD မှာ ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာတောင် ကြာသွားပါပြီ….ခုတင်ပေးမယ့် software လေးကတော့ apk icon တွေကို PC ပေါ်မှာ မြင်စေမယ့် ကောင်လေးပါ… PC မှာ install လုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ….ကဲ လိုတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြပါဗျာ…… Download Here rar password : saikhinetint@MMDT အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…. စိုင်းခိုင်တင့် ([email protected]) လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဝေဖန် အကြံပြုချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် မနက်ဖြန်တွေအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ…. ****(Download link ကို Drop box ကနေ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်)****
Apk Shell Ext (Apk Icon တွေကို ကွန်ပြူတာမှာပေါ်အောင်လုပ်မယ်)
January 31, 2013 | 12 Replies
Computer မှာ Apk Iconလေးတွေပေါ်ချင်ရင် ZIP ဖိုင်ကိုဒေါင်းပါ… ဖြည်လိုက်ပါ အထဲ ထဲမှာ Install.bat Uninstall.bat apkshellext.dll ကိုတွေ.ပါလိမ့်မယ် အဲအထဲမှ install.bat ကို run လိုက်ပါ… ပီးရင် စက်ကို restart ချလိုက်ပါ… ပြန်တက်လာရင် apk icon လေးတွေ တွေ.ပါဘီ… uninstall လုပ်ချင်ရင် uninstall.bat ကို run ပီးrestart ချလိုက်ပါ ok သွားပါပီ မှတ်ချက်။ ။ System Error ရှိသောစက်များ virus ကိုက်ခံထားရသောစက်များမရပါ။ ယူရန်ဒီကိုနှိပ်ပါ (Direct Download Link)
December 28, 2012 |9Replies
ဒါလေးကတော့ RECOVERY MODE ၀င်ရခက်နေသောသူများ Click၁ချုက်နှိပ်ရုံနဲ့RECOVERY MODEရောက်သွားမှာပါ USB DEBUGGING ON ထားရပါမယ်…အဲDRIVERရှိရမယ်Computerထဲမှာ… POWERဖွင့်ပီအောက်ကပုံအတိုင်းလုပ်လိုက် okသွားလိမ့်မယ် ဒီမှာယူသွားပါ… PASSWORD: mingyitaw Easy Reboot Recovery (Direct Download Link) အဆင်မပြေပါက [email protected] ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်… _________WE LOVE SHARING_________
November 20, 2012 |6Replies
ဒီ software လေးကတော့ windows7အတွက်ပါ android apk ဖိုင်တွေကို ကွန်ပျူတာကနေ မြင်ရုံတင်မကပါဘူး message ဖတ်တာတွေ ဖုန်းခေါ်တာတွေ sd card ထဲက data တွေကို ပြင်တာတွေ back up လုပ်တာတွေ restore ပြန်လုပ်တာတွေ app တွေကို install လုပ်တာတွေ uninstall ပြန်လုပ်တာတွေ စသည်ဖြင့် ကွန်ပျူတာကနေ လိုသလို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်… လိုချင်သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြပါဗျာ..ကျွန်တော် မူရင်းလင့်ကနေပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… Download Here အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ…. စိုင်းခိုင်တင့် ([email protected]) လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဝေဖန် အကြံပြုချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် မနက်ဖြန်တွေအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ….
Zenfone Root Apk ! CWM Root For GT-I9506 (4.3 ) !
Xperia Root Kit ( 2014 ) !
Max Axe !
Forward Training Center v1.0 (Android Application)
How To Creat & Edit MiUi Theme ! ••••••••••
Visit Site FX 比較
Views (74) | Comments (15)
Views (71) | Comments (6)
Views (71) | Comments (14)
Views (58) | Comments (12)
Views (57) | Comments (12)
HTC Driver,HTC Super Tools
91 PC Suite For Android (Android ဖုန်းတွေအတွက်အသုံးဝင် Softw...
Views (39) | Comments (5)
Views (5171) Mobogenie PC Suit 2.1.1 For Android
Views (5056) Apk Shell Ext (Apk Icon တွေကို ကွန်ပြူတာမှာပေါ်အောင်လုပ်မယ်)
Views (4535) ကွန်ပြုတာအတွက် Zapya (Beta)
Views (4487) muzhiwan for PC (to visible apk icon on PC)
Views (4191) Easy Reboot Recovery
Views (3880) Wondershare MobileGo for Android
Views (2993) Like Us On Facebook! Myanmar Calendar
Categories Android App (233)
Android Game (190)
Android Tutorial (125)
Android စုစည်းမှု (503)
Cydia Tweaks (For JailBreak iOS Devices) (26)
Firmware တင်နည်းများ (106)
Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ (1)
I OS App (9)
I OS Firmware များ (8)
I OS Game (2)
I OS Tool (2)
Internet Setting ချိန်နည်း…… (6)
IOS Tutorial (23)
iOS စုစည်းမှု (32)
Mobile Driver များ (3)
Recovery Mode ထည့်နည်းများ (25)
Root လုပ်နည်းများ (229)
Unlock Bootloader လုပ်နည်းများ (5)
ကွန်ပျူတာ Software များ (17)